Poco X3 GT: astaamaha, qiimaha iyo helitaanka | Androidsis
Haaruun Rivas | 29/07/2021 09:55 | Mobiles, Noticias
Xiaomi waxay suuqa ku soo bandhigtay taleefan casri ah oo cusub oo loogu talagalay qeybta ciyaarta, waana kan Little X3 GT. Qalabkani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo la bixiyo, laga bilaabo muujinta heerka cusbooneysiinta 120Hz si loo bixiyo muuqaal aad u dheecaan badan oo siman, kala-guur iyo animations.
Qalabkani wuxuu kaloo la yimaadaa processor-ka Mediatek processor, oo aan cid kale ahayn Cufnaanta 1100, mid ka mid ah qaybaha ugu awooda badan soosaarayaasha semiconductor-ka Taiwanese. Dhammaan sifooyinka haray iyo tilmaamaha ayaa lagu ballaariyay xagga hoose.
1 Dhammaan wixii ku saabsan Poco X3 GT cusub, qalab raqiis ah oo wax badan la soo bandhigo
Dhammaan wixii ku saabsan Poco X3 GT cusub, qalab raqiis ah oo wax badan la soo bandhigo
Bilawga, Poco X3 GT cusub ayaa la socda shaashad ah IPS LCD tiknoolajiyad lehna 6.6-inji dadban. Dhanka kale, qaabkani wuxuu leeyahay FullHD + qaraarka 2,400 x 1,080 pixels waxaana guddiga lagu daboolay muraayadda Gorilla Glass Victus, tii ugu dambeysay uguna xoogga badneyd ee Corning.
Dhinaca kale, taleefanku wuxuu la yimaadaa Mediatek's Dimensity 1100 processor processor, sidaan horeyba si kooban ugu sheegnay bilowgii. Qeybtaan sideed-xudunta ah waxay ku shaqeysaa ugu badnaan saacad dhan 2.6 GHz waxayna leedahay cabbirka cabbirka 6 nm. Intaas waxaa sii dheer, waxaa weheliya Ramu 8 GB ah iyo meel lagu kaydiyo oo ah 128 ama 256 GB. Waxyaabaha lagu seegayo qalabkan ayaa ah ballaadhinta iyada oo loo marayo booska maaddaama aysan lahayn wax taageero ah kaararka microSD.
Marka laga hadlayo nidaamka sawir qaadista, Xiaomi's Poco X3 GT ayaa la socda nidaam kamarad saddex-geesood ah oo ka kooban 64 MP shidma weyn oo leh f / 1.8 aperture, toogte xagal-ballaadhan-xagal ah oo loogu talagalay sawirro ballaaran oo 8 MP ah oo leh 120 ° xagal aragti ah iyo f / 2.2 aperture, iyo 2 MP lens lens oo loogu talagalay sawirro dhow. Dabcan, terminaalkani wuxuu la yimaadaa duubista fiidiyowga ee 4K xallinta 30 wareegsan ilbiriqsi kasta (fps) iyo, sawirrada iskaa wax u qabso iyo in ka badan, waxay leedahay kamarad hore oo 16 MP ah oo leh f / 2.5 aperture oo ku taal daloolka shaashadda.
Is-maamulka madax-bannaan ee mobilkaani waxaa bixiya bateri weyn oo awooddiisu tahay 5,000 mAh. Tani waxay ku habboon tahay a 67W tikniyoolajiyadda degdegga ah kaas oo ballan qaadaya inuu qalabka ka qaadayo min madhan ilaa buuxo illaa illaa 42 daqiiqo iyada oo la adeegsanayo talooyin USB-C ah.
Qaybta isku xirnaanta taleefankan ayaa leh taageerada 5G NA iyo shabakadaha NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 isticmaalka hooseeya, GPS, A-GPS iyo GLONASS. Waxay sidoo kale la socotaa NFC chip lacag bixinta xiriir la'aan (xiriir lama lahan) Isla mar ahaantaana, marka la eego nidaamka qalliinka, waxay la timaadaa Android 11 hoosta MIUI 12.5 lakabaynta qaabeynta Poco.
Astaamaha kale waxaa ka mid ah akhristaha faraha-dhajinta ku xiran, qalabka ku hadla qalabka isleetiga, gelinta jaakada 3.5mm, iyo Liquid Techonology 2.0 qaboojinta si looga hortago taleefanka inuu kululaado marka si xad dhaaf ah loo isticmaalo, ha ahaado ciyaaro wax qabad sare ama codsiyo dalbanaya.
YAR X3 GT
MUUQAAL 6.6-inch IPS LCD leh FullHD + xallinta 2.400 x 1.080 pixels iyo 120 Hz heerka cusbooneysiinta / Corning Gorilla Glass Victus
PRORESOR Cufnaanta 1100
Kaydinta Gudaha 128 / 256 GB UFS 3.1
KAAMARKA DAR Triple: 64 MP oo leh f / 1.8 (dareeraha ugu weyn) + 8 MP (xagal balaaran) + 2 MP (monochrome)
KAAMI HOR 16 xildhibaan leh fur f / 2.5
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 oo leh MIUI 12.5 Poco
BATARY 5.000 mAh waxay taageertaa 67 W kharashka degdegga ah
Isku xirnaanta 5G. Bluetooth 5.2. Wifi 6. USB-C. NFC
KALE NATIIJADA Ku hadla idaacadaha
Poco X3 cusub ayaa horeyba looga heli karaa gobollada qaar, laakiin lagama helin Yurub. Su'aasha, waxaa ku dhawaaqay soo saaraha Shiinaha Afrika, Latin Amerika, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Waqtigan xaadirka ah lama garanayo goorta ay gaari doonto suuqa Yurub iyo, sidaas darteed, Spain.
Poco X3 GT oo leh 8 GB oo RAM ah oo leh 128 GB oo ah xusuusta gudaha: 299 doolar (qiyaastii 255 euro qiimaha sarifka hadda).
Poco X3 GT oo leh 8 GB oo RAM ah oo leh 256 GB oo ah xusuusta gudaha: 329 doolar (qiyaastii 280 euro qiimaha sarifka hadda).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi Poco X3 GT: mobilada ciyaarta cusub ee leh shaashadda 120 Hz iyo Dimensity 1100
10 -ka Barnaamij ee Orodka ugu sarreeya